Armand Duplantis qaaday rikoodhkii dunida ee wareegga cirif ee 6 mitir iyo 17 sentimitir | Apg29
Laakiin waxaan rejeyneynaa in aaminsan yihiin in Ciise waa weyn!
Waa arrin aad u dheer oo cajiib ah. Laakiinse anigu uma aan adkaysan farta ku fiiqaya in rajadeenna rumeeyey Ciise waa aad u weyn oo wanaagsan. Duplantis ku dhacday derin mar kale laakiin rajadayada xajiya jidka oo dhan waaritaan!
6 mitir iyo 17 sentimitir
Armand Duplantis tartamaya Sweden ayaa jabiyay rikoorka dunida ee wareegga cirif ee gala gudaha fiidkii ee Poland.
Armand Duplantis, loo yaqaan "Mondo" waa vaulter pole American-Swedish. Waxa uu leeyahay dhalashada dual, laakiin tartankii for Sweden.
Waxa uu maray height of 6 mitir iyo 17 sentimitir at isku daygii labaad.
Waa arrin aad u dheer oo cajiib ah.
Lakiin ma sheegi karo caawimaad ahayn ra'yigayga in rajo rumeeyey Ciise waa aad u weyn oo wanaagsan. Duplantis ku dhacday derin mar kale laakiin rajadayada xajiya jidka oo dhan waaritaan!
Romans 8: 24A. Waayo, rajo waannu badbaadi doonnaa.
Waxa uu jeexjeexay bar ku saabsan isku day ugu horeysay, laakiin labaad ee uu sameeyey! 6 mitir iyo 17 sentimitir! Si toos ah ka dib markii boodi ku orday soo baxay si ay daawadayaasha iyo segerjublade.
Intee ka sii badan waa in aynaan segerjubla rajo ah in Ciise Masiix ayaa ku guuleystay noo taraya?